CGH ဆေးရုံသမိုင်း | CGH Hospital
CGH ဆေးရုံသည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး အထူးကုဋ္ဌာနပေါင်းများစွာရှိသော ထိုင်းနိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ဆေးရုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တော်၀င်ထိုင်းလေတပ်ဆေးကျောင်း၊ Thammasat တက္ကသိုလ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တစ်ခြားထိပ်တန်း ဆေးကျောင်းတို့မှ ဆရာဝန်များနှင့် သွားဆရာဝန်များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကုတင် ပေါင်း ၂၀၀၊ အထူး ကု စင်တာ ၁၅ ခုနှင့် အထူးကုဆရာ၀န် ၃၃၀ ကျော်ရှိသော ခေတ်မီ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆေးရုံအုပ်စုတွင် ဆေးရုံခွဲ ၃ ခုရှိပြီး - CGH ဆေးရုံ (Phaholyothin လမ်း၊ Donmuang လေဆိပ်အနီး), CGH Saimai နှင့် CGH Lamlukka စသည် phyit နေရာ ၃ နေရာတွင် တည်ရှိသည်။
ဆေးရုံသည် Don Muang အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ကားဖြင့် ၅ မိနစ်နှင့် ၁၀ မိနစ်သာလျှင် မောင်းနှင်ရုံ အကွာအဝေး အတွင်း တည်ရှိသည်။ ထိုအပြင် ဒေသတွင်း လတ်ဆတ်သော စျေးတစ်ခုဖြစ်သည့် Saphanmai စျေးနှင့် အလွန်နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီး ထိုSaphanmai စျေးသည် ၂၄ နာရီ ၀န်ဆောင်မှုပေးသော မြို့၏ အကောင်းဆုံး အစားအစာစင်တာ တစ်ခုဖြစ်သည်။
အမြင်/ တာဝန်/ တန်ဖိုး
CGH ဆေးရုံသည် လူနာတစ်ယောက်ချင်းဆီ၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေရန် အဓိကထားပြီး လူနာများ၏ လိုအင်ဆန္ဒကို ပြည့်ဝအောင် အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ဆေးရုံတစ်ရုံလုံး အတွင်း Wi-Fi ဝန်ဆောင်မှု
Air Tube သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ဆီးချိုရောဂါနှင့် endocrine ဆေးခန်း
နား၊ နှာခေါင်းနှင့်လည်ချောင်း (ENT) ဆေးခန်း
CGH သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ထိုင်းလူမျိုးများအား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု အစီအစဉ်များကို အခမဲ့ စစ်ဆေးပေး သော လှူဒါန်းမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေး ခဲ့သည်။
အရေးပေါ်၊ စိတ်ဒဏ်ရာနှင့် အသေးစိတ် စောင့်ရှောက်သော ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးလွှမ်းခြုံမှု၏အဓိကအပိုင်းဖြစ်သည်။
CGH Group မှ အရေးပေါ်စင်တာသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ လူနာများအားလုံးအတွက် အခြေခံ အရေးပေါ် အသက်ကယ်နည်း နောက်ဆုံးပေါ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်း နှင့် အရေးပေါ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ၇ရက်နှင့်၂၄ နာရီလုံး ဝန်ဆောင်မှုများပေးသည်။
အရေးပေါ်ဌာနတွင် အလုပ်လုပ်သော ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများသည် လေဖြတ်ခြင်းစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၏ အရေးပါသောအဖွဲ့၀င်များဖြစ်သည်။
CGH Group သည် ပြင်းထန်စွာ မကျန်းမမာသောလူနာများကိုကိုင်တွယ်ရန်အတွက် EURAMI နှင့် CAMTS တို့၏အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံထားရသည့် အာရှဒေသတွင်းရှိ အရည်အသွေးမြင့် လူနာတင်ယာဉ်လေကြောင်း အော်ပရေတာဖြစ်သော Siam Land Flying (Medical Wings) နှင့် အတူ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များသည် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ် အခြေခံ၍ လူနာအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်ပေးပြီး လေကြောင်း သို့မဟုတ် မြေပြင်လူနာတင်ကားဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ဝန်ဆောင်မှုများပေးသည်။
CGH (Advanced Medical Center Company Limited)
290 Paholyothin Road, Anusaowaree, Bang Khen, Bangkok 10220 Thailand
Tel. +66 2552 8777 (Emergency ext. 335) Fax: +66 2552 0666